crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Wax kabaro Eyga | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna December 15, 2016	0 1,065 Views
Muqdisho (Himilonews) – Bahal ku qoys ah Yeyda ama Uuleyda oo dadka la dhaqma. Wuxuu galaa adeegsi oo, iyada oo laga eegayo sifooyinkiisa garasho iyo wax urisnimo, dunida horumartay waxay u adeegsadaan baaritaannada. Waxa sharciga ka noqday dunida qaar waa in tusaale ahaan gobal kamid ah Maraykanka saraakiisha booliska loo ogol yahay inay qaniini karaan Ey qeylinaya si ay u aamusiyaan. Hayeeshe, taas ma ahan wax la qaayibo, marka lala barbardhigo Eeyaha ku nool dhulka Soomaalida oo rafaad, dil iyo dhaawac kala kulma da’da u dhaxeysa 8-15 jirka. Halka marmar la arko dad waaweyn oo iska eryanaya ama dhagxeynaya Ey aan waxba ka sameynin.
Jiritaan la’aanta urur u dooda xuquuqda Eeyaha iyo Gamaanka qaar sida Dameerka iyo Baqlaha iyo Bisadaha, dhibaatooyinka lagu hayo noolahan dadka la dhaqma – wax dheefna u ah nolol maalmeedkeenna, way sii badanayaan. Mana jirto wacyi-gelin iyo ol’ole ballaaran oo lagu garab istaago xuquuqdooda.
Cimri-dhererkiisu wuxuu gaaraa 10-13 sanadood. Sidkiisa waxaa loo shintiriyaa inta u dhaxeysa 58-68 maalmood.
Haddii lagu yiraahdo waxaad lamid tahay Eyga, fadlan hala boodin caay iyo ul toona. Waxaan kuu sheegi karnaa sifooyin aad wadaagi kartaan adiga iyo Eyga.
Eygu waxaa noole Ilaahay ku beeray foojignaan iyo dhugsanaan fiiro ku socota. Taas oo ka saacida in meel kaliya aan halmar lagu waxyeeli karin. Jiifkiisu ma badna oo ma dhacdo saacado xiriir ah inuu hurdo dheereysto. Abaalka saddax maalin oo xiriir ah loo galo, wuxuu xusuusnaadaa saddax sanadood oo xiriir ah.
Dareenkiisa urisnimo wuxuu 10,000 ka xoog badan yahay midka dadka. Waxayna wax ka maqli karaan afar jibbaar fogaanta ay dadku wax ka maqli karaan. Habeenkii waxay wax u arkaan si ka badan kana fiican sida dadku wax u arkaan.
Cilmi-baaris ay sameysay jaamacadda California ayaa lagu sheegay in Eeyuhu ay aad uga hinaasaan ama maseyraan markay arkaan qofkooda oo jaceyl iyo xiiso u muujinaya qof ama wax kale.
Dalka Maraykanka ayaa ah dalka ugu badan ee ay ku nool yihiin Eeyaha la rabaayaysto – tiro gaaraysa 75 malyuun.
Hal-ku-dhigyadii laga yiri Eyga waxaa kamid ah;
Ey laf diiday isagaa buka.
Af nooli waa hadlaa, Eyna waa ciyaa.
Ey markay cidiisu sab qabto ayuu meelaha warwareegaa.
Previous: Wax kabaro Jiirka ama Doolliga
Next: Wax kabaro Digaagta
Muslimiinta Burundi oo helay Tarjamadii ugu horreysay Qur’anka.
Yaxaas cunay Wiil baxsad ka ahaa bileyska Florida